Madaxweynaha Puntland oo dalacsiiyay saraakiil ciidan oo door ka qaatay xasilinta Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo dalacsiiyay saraakiil ciidan oo door ka qaatay xasilinta Mudug
Madaxweynaha Puntland oo dalacsiiyay saraakiil ciidan oo door ka qaatay xasilinta Mudug
September 10, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Den oo darajada dalacsiinta u xiraya sarkaal. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dalacsiiyay ku dhawaad 20 saraakiil ciidan ah xaflad xalay fiidkii lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, halkaas oo madaxweynuhu uu safar ku joogo.
Dalacsiinta saraakiisha ayaa lagu abaalmariyay doorkii ay ka qaateen xasilinta gobolka Mudug iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab, kuwaasoo kooxdii gobolka uga howlgali jirtay la qabtay lana toogtay bishii June.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeysay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo la sheegay in ay la yeelan lahayd maamulka Somaliland oo la qorsheeyay in ay ka dhacaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qoraal [...]
Diyaaradaha dagaalka Yuhuuda oo duqeeyay garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq ee gudaha Suuriya
Dimishiq-(Puntland Mirror) Diyaaradaha dagaalka Yuhuuda ayaa bartilmaameedsaday garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda Suuriya ee (SANA) maanta oo Jimce ah. SANA oo soo xiganaysa ilo-wareedyo milatari [...]